NextMapping | Courses an-tserasera
Manambatra ny ho avin'ny fikarohana momba ny asa miaraka amin'ny mahomby sy mora ny fampiharana paikady. Ny safidy ataontsika an-tserasera dia misy ny fandinihan-tena amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny mpanazatra ho an'ny fahombiazana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fampiharana.
Ny fahaiza-manao vaovao ilain'ny mpiasa amin'ny fanavaozana
Miaina sy miasa amin'ny fotoana tsy mbola nisy hatrizay isika. Ny pandemena iray dia nanova ny fiainana sy ny orinasa mandrakizay. Ahoana no ahafahanao mitarika amin'ny fanovana sy fanakorontanana amin'izao vanim-potoana vaovao izao? Ny ho avy dia miantso ny tsirairay ho lasa mamorona kokoa sy mamokatra kokoa noho ny teo aloha.
Hanome boky maimaimpoana
Ny hoavin'ny fahombiazan'ny asa dia tsy hiantehitra amin'ny 'mahery' iray na roa ao anaty orinasa iray. Ianaro ny antony hitranga amin'ny hoavy ny 'isika' sy ny fomba hamoronana kolontsaina fanavaozana efa vonona hiovana.
Mamandria izao ho an'ny 50%
Ahoana ny fitrandrahana sy fihazonana ny talenta farany ho an'ny ankehitriny sy amin'ny hoavin'ny asa
Iray amin'ireo olana lehibe atrehan'ny orinasa amin'izao fotoana izao ny fahitana sy ny fitazonana ny olona tsara. Ny marina dia ny fomba taloha nandefasana asa, nanakarama asa ary manantena ny olona hijanona tsy hiasa intsony.
Ahoana no fomba hitondrana mpitondra mpitondra ao amin'ny Transformational izay manome aingam-panahy sy mandrisika ireo ekipa
Ny fitarihana Transformational dia mifantoka amin'ny singa manova ny kolontsaina. Misy ny mpitarika nentim-paharazana 4 'I amin'ny Transformational leadership izay handaniantsika fotoana mandritra ity fandaharana ity.
Nozaraina ny ho avy - Ahoana no fomba hamoronana kolontsaina eo amin'ny toeram-piasana zaraina
Kolontsaina ny Shared Leadership. Misy ny tanjona iraisana, ny fandraisana andraikitra ary ny fanekena iraisana. Kolontsaina mailamailaka, fanavaozana ary fiaraha-miasa izany. Hevero ho toy ny avo lenta amin'ny fiaraha-miasa ny ekipa.
Ahoana no fomba hitarihana ny fanovana VS hitantana fanovana hamoronana ny ho avin'ny asa
Ny fahaiza-mitarika fanovana dia tena ilaina amin'ny asa lavitra ary manova haingana ny toeram-piasana.
Ahoana no fomba hitarihana amin'ny ho avy amin'ny asa - Na misy na tsy misy lohateny
Ny ho avin'ny asa dia izao! Nozaraina ny ho avy ary mitaky ny tsirairay hanangana fahaiza-mitarika fototra na inona na inona lohanteny.
Anisan'ny fampianarana ny
Fidirana eo noho eo
Ny fandinihana tranga azo atao manokana ho an'ny tenanao manokana amin'ny sehatry ny asa
Ny fidirana amin'ny fitaovana fandalinana infografika dia manangona ireo fanamarinana momba ny fahavitan'ny fianarana
Fidirana mampiasa fitaovana 24 / 7 365 Andro isan-taona
Ny vidiny mialoha sy ny fisoratana anarana alohan'ny fisoratana anarana amin'ny Live NextMapping ™ Events
Ny fijerena laharam-pahamehana dia asaina mangataka fampiharana amin'ny Programa NextMapping ™ ho avy
Ny fidirana amin'ny Podcast Webinars Hot sy ny hetsika an-tserasera hafa
Fidirana amin'ireo tontolon'ny manadihady manerantany momba ny manadihady sy ny fandraisan'anjara niavaka nataony
EBook maimaimpoana, "Mastery Mastery amin'ny vanim-potoana nomerika"
Ny fidirana tsy misy fangarony amin'ny atiny rehetra sy misy vaovao ho an'ny volana 6!
Fampitana fampianarana azo alaina
Ny mpanazatra manam-pahaizana manokana anao nofidina sy notendrena ho amin'ny faharetan'ny fianarana
3 Mpampianatra manokana Hour dia miantso isaky ny isaky ny taranja
Niavaka manokana momba ny fampiharana ny votoatin'ny asa; Ny mpanazatra dia hiresaka momba ny toe-javatra misy anao manokana
Ny fisoratana anarana laharam-pahamehana ho an'ireo taranja vaovao an-tserasera momba ny asa ho avy
Ny fidirana amin'ireo votoatin'ny boky momba ny tranokala web sns
Hitako fa fandaharana lehibe ho an'ny olon-drehetra amin'ny sehatra rehetra misy fikambanana izany, tsy voafetra ho an'ireo manana andraikitra ara-drazana. ”
Vidio ho an'ny ekipanao na ny orinasa misy anao
Raha te hanome fidirana fiofanana an-tserasera amin'ny ekipa iray feno 20 na mihoatra ianao na te hiresaka momba ny fanaovana mari-pamantarana fotsy ho anay ny orinasa.
Faly izahay hiresaka aminao momba ny vidiny mirary.
Mifandraisa aminay momba ny vidin'ny
Aoka ho eo amin'ny sisiny mitarika
Manentana aingam-panahy, fampahalalana, ifampizarana ary ampiasaina amin'ny filanao tokana.
Fanabeazana virtoaly tokana mba hampandroso haingana ny fahaizanao.
Ny fijerena stratejika sy ny fikarohana natao hampiakatra ny orinasanao.
Fiofanana efa natao manokana hampivelatra ny fahaizan'ny mpitondra sy ny ekipanao.